News - Ọdịnihu teknụzụ bụ nghọta anya: Kidsmụaka mgbagha mara ọkwa "laghachi n'ọdịnihu 2 ″ maglev DeLorean oge ụgbọ ala
Diecast Truck na traktọ na Trailer Model
Ingbọ ala Model Resin
Modelkpụrụ ụgbọ ala
Future technology bụ visual nghọta: logmụaka mgbagha mara ọkwa “laghachi ga-eme n'ọdịnihu 2 ″ maglev DeLorean oge ụgbọ ala
Taa bụ ụbọchị nkịtị maka ọtụtụ ndị mmadụ, mana ọ bụ ụbọchị dị mkpa maka ndị na - akwado ihe nkiri ochie “na - eme n’ọdịnihu 2 future. Taa bụ ụbọchị mgbe Marty na Dr. Brown, ndị na-akwado akụkọ a, laghachi na ọdịnihu. Iji cheta ubochi a, ebuputala otutu ihe ndi ozo gbasara ihe nkiri.
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ egwuregwu ụmụaka Hong Kong akpọrọ ụmụaka mgbagha mara ọkwa oge ụgbọ ala DeLorean nwere mmetụta nkwụsịtụ iji weghachite ihe nkiri nkiri kpochapụwo nke ụgbọ ala ahụ na-agbapụ site na wormhole. E kewara ngwaahịa niile n'ime isi na ụdị ụgbọ ala DeLorean. Site n'iji ụkpụrụ ndọta magnetik, a na-akwụsị ụgbọ ala n'elu isi ya. Ngwaahịa niile na-ele anya dị ka sci-fi. O di nwute, a ghaghi ire ahia a rue nkeji nke ato nke 2016 na mbu. Ya mere, ọ bụ naanị na ọkwa mbu ugbu a. Ọ bụrụ n’inwere ebumnuche ịzụta ya, ịnwere ike ide ya site na ebe nrụọrụ weebụ animation na Taiwan. Kaosiladị, ọnụahịa gọọmentị dị elu dịka dollar 1600 Hong Kong (ihe dị ka yuan 1310). Ikwesiri iche echiche nke ọma tupu ị belata aka gị.
Ndị enyi hụrụ fim ahụ niile maara na ụdị a sitere na ụdị DeLorean dmc-12 na fim nke abụọ nke usoro ahụ. Onye ọrụ gọọmentị ahụ kwuru na ọ bụ 100% na-eguzosi ike n'ihe nye ihe nkiri mbụ ahụ maka mmepụta. Ọnụ ụzọ gull gull, igwe oge na wiil ndị dị na akpati ahụ ka emere ka ọ dị ndụ. Ọnụ ọgụgụ nke ihe nlereanya ahụ bụ 1: 20, ya mere ogologo ogologo nke ihe nlereanya ahụ bụ 22 cm. Ejiri ụgbọ ala 10 nwere ọkụ ọkụ, nke nwere ike ịpụta ọkụ na-enwu gbaa. Mgbe ịwepụsịrị isi ndọta magnet na iji taya nkịtị dochie ihe nlereanya ahụ, enwere ike igosipụta ya dịka ụdị ụgbọ ala nkịtị.
Tupu ire ere njikọ: zụta animation
Ọnụahịa gọọmentị: dollar 1600 Hong Kong (ihe dị ka yuan 1310)
Post oge: Jan-21-2021
Adreesị: 201lọ 201, No.5 Weige Road, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province